आज मिति २०७७, भदौ २५ गते बिहीबारको दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार ०८:०४ September 10, 2020 काठमाडौं डेष्क
मेष : तपाईंले आराम गर्न सक्ने दिन हो। तपाईंका मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीरको मालिश गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो दैनिक तालिकाबाट समय निकालेर आज आफ्ना साथीहरूसँग बाहिर जानुपर्छ। सेक्सको इच्छित परिणाम पाउनु हुनेछ। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीको मायाम जीवनका सबै कठिनाइहरू बिर्सिनु हुनेछ।
वृष : तपाईंमा धार्मिक भावना उत्पन्न हुनेछ जसले गर्दा तपाईंलाई साधु-संतहरूबाट केही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गर्न धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्ने मन लाग्नेछ। सकारात्मक र सहयोगी साथीहरूसँग बाहिर जानुहोस्। आफ्नो प्रिय वा जोडीबाट राम्रो सञ्चार वा सन्देशले आज तपाईंको हौसलामा बृद्धि गर्नेछ। नयाँ उद्यमले लोभ्याउँछन् र राम्रो लाभको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
मिथुन : केही व्यायाम गरेर आफ्नो दिन सुरु गर्नुहोस्। यस समय तपाईंले आफैंलाई राम्रो महसुस गर्न सुरू गर्नु हुनेछ – यसलाई नियमित रूपमा दैनिक गर्नुहोस् र यसमा लीन हुने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। रचनात्मक प्रकृतिकका कार्यहरूमा संलग्न हुनुहोस्। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा समर्पित हुनेछन्।
कर्कट : तपाईं यात्रा गर्न निकै कमजोर भएकोले लामो यात्राबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो समस्या बिर्सिनुहुनेछ र परिवारका सदस्यहरुसँग राम्रो समय बिताउनु हुनेछ। अचानक भएको रोमान्टिक तर्कले तपाईंलाई भ्रममा पार्न सक्नेछ। आफ्नो काम र आफ्नो प्राथमिकतामा ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी के अर्थमा लिनुभएको छ भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
सिंह:सबैले भनेको सुन्नुहोस्, तपाईंका समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। परिवारको दायित्वलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंले लापरवाही गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। कठिन प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं निश्चित भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनकि आज तपाईंको दिन हो। आज काममा सबैले तपाईंलाई प्रेम र समर्थन गर्नेछन्। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
कन्या : आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। आज अनुभवी मान्छेसँग मिलेर तिनीहरूबाट केही सिक्नुहोस्। आज तपाईंहरू दुवैमा एक-अर्का प्रतिका सुन्दर भावनाहरू धेरै नजिकबाट सञ्चार हुनेछन्।
तुला : तपाईंको साँझले तपाईंलाई तनाउयुक्त राख्न सक्ने मिश्रित भावना दिनेछ। धेरै चिन्ता गर्ने तर कुनै आवश्यकता छैन – किनकि खुशीले तपाईंलाई निराशाले भन्दा बढी आनन्द दिनेछ। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। रोमान्सले तपाईंको हृदय ढाक्नेछ। व्यापार साझेदारले सहायतापूर्ण व्यवहार गर्नेछन् र तपाईंले सँगै रहल काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
वृश्चिक :तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। आफ्नो जोडीसँग बस्दा सान्त्वना, प्रेम र राहत पाउनुहोस्। प्रेमको चस्काले तपाईंलाई आज सुत्न दिंदैन। तपाईंले प्रत्येक कदममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नुभयो भने – सफलता निश्चित तपाईंको हो। तपाईंले आज आफ्नो जोडीसँग तनाउमुक्त दिन बिताउनु हुनेछ।
धनु : “आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ।” तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध आज राम्रो हुने छैन। तपाईं एउटा ठूलो कुराको भाग हुनु हुनेछ जसले तपाईंलाई कृतज्ञता र पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। एउटा अपरिचितले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच झगडा हुन सक्छ।
मकर : तपाईंको मनले राम्रा कुराहरू सुन्नेछ। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। तपाईं रोमान्टिक विचार र विगतका सपनाहरूमा हराउनु हुनेछ। विवाद वा कार्यालयको राजनीति; तपाईंले आज सबैमा शासन गर्नुहुनेछ। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
कुम्भ :एउटा मित्रले तपाईंको खुल्ला मन र सहिष्णुता शक्तिको परीक्षण गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो मान आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन र हरेक निर्णयमा तर्कसङ्गत हुन होसियार हुनुपर्छ। पुराना सम्पर्क र मित्रहरू सहयोगी हुनेछन्। तपाईंले प्रेम सम्बन्धमा गलत बुझ्ने सम्भावना छ। नयाँ ग्राहकहरुसँग बातचीत गर्ने यो एउटा अद्भुत दिन हो। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई कतै घुमाउन लिएर जानु भयो भने, तपाईंहरूको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ।
मीन :तपाईंलाई रोमाञ्चक र तनाउमुक्त राख्ने गतिविधिहरुसँग संलग्न हुनुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। आज रोमान्सको लागि कुनै आशा छैन। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आज तपाईंको जोडी आफ्नो कामसँग यति आशक्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंले उदास महसुस गर्नु हुनेछ।